मेशिन लर्निंग: यो के हो र एन्ड्रोइडमा यसको के प्रयोग गरीन्छ Androidsis
मेशिन लर्निंग भनेको के हो र यो केको लागि हो?
कृत्रिम बुद्धिमत्ता आजको एन्ड्रोइडमा एक मुख्य पात्र हो। अधिक र अधिक प्रोसेसरले न्यूरल मोटर्स वा कोप्रोसेसरहरूको प्रयोग गर्न सुरू गरिरहेको छ जुन एआई कार्यहरूमा संसाधनहरू छुट्याउँछ। केहि चीज जुन हामी भर्खरको बजारमा मारिएका केही उच्च-अन्त प्रोसेसरहरूमा देख्न सक्षम भएका छौं, जस्तो कि Exynos 9820 o Kirin 980। कृत्रिम बुद्धिमत्ताको साथ हामी अर्को शब्द फेला पार्दछौं जुन मेशिन लर्निंग हो।
बानी हामी हातमा कृत्रिम बुद्धि र मेशिन लर्निंग सुन्न। यद्यपि एन्ड्रोइडमा धेरै प्रयोगकर्ताहरूलाई वास्तवमै थाहा छैन कि यो के हो वा के हो भनेर। अर्को हामी तपाईको बारेमा अझ बढी बताउन जाँदैछौं, ता कि तपाई यी अवधारणाहरूको बारे स्पष्ट हुनुहुन्छ कि ती आज कति सामान्य छन्।
वास्तविकता यो हो कि ती दुई फरक अवधारणाहरू हुन्, तपाईं कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ, यद्यपि ती निकट सम्बन्धित छ। बजारमा दीप लर्निंग जस्ता धेरै उपस्थिति लिन थालेको अर्को शब्द पनि छ। तल हामी यी अवधारणाहरूको बारेमा तपाईंलाई अझ बढी बताउने छौं, ताकि तपाईं बुझ्नुहुनेछ कि ती प्रत्येकले के प्रतिनिधित्व गर्दछ।
2 मिसिन प्रशिक्षण
3 कृत्रिम बुद्धिमत्ता एन्ड्रोइडमा प्रयोगको लागि के हो?
हामी कार्यहरू सन्दर्भ गर्न सक्छौं जुन प्राय: चाहिन्छ वा कार्यान्वयन गर्न सक्षम हुन मानव बुद्धिको आवश्यक पर्छ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसको अवधारणाको उत्पत्ति comp० को दशकमा भएको छ, कम्प्युटि theको संसारमा। त्यतिखेर यो शब्द मानिसहरुलाई सरल तरीकाले गर्न सक्ने कार्यहरु हल गर्नका लागि सिर्जना गरिएको हो, तर त्यसले कम्प्युटरलाई चुनौती दिन्छ। यो यसको मूल हो।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता भित्र हामी विशिष्ट कार्यहरू भेट्टाउँछौं। ती मध्ये हामी फेला पार्न सक्छौं केहि चीजहरू कसरी पहिचान गर्ने, एआईको साथ फोनमा क्यामेरा प्रयोग गर्दा हामीले देख्ने केही कुरा, जुन मेशिनले हामीसँग मौखिक रूपमा संवाद गर्न सक्दछ, जस्तै सहायकहरू, इत्यादि। कार्यहरू जुन हामी अधिक र अधिक बारम्बार देख्छौं।
दोस्रो, हामी मेशिन लर्निंग फेला पार्दछौं। जसरी यसको नामले स indicates्केत गर्दछ, यो मेशिन शिक्षाको बारेमा हो। यो ए.आई. को अंश हो जुन तयार पारिएको हो कुनै समस्या वा प्रश्नको उत्तर वा समाधान दिन समर्पित छ। यस अवस्थामा, उत्तर मैकेनिज्मलाई पहिल्यै प्रोग्राम गरिएको बिना नै दिइनेछ। प्रणाली आफैले यो उत्तर दिन वा यो समस्या समाधान गर्न सिक्नेछ।
यो केहि गर्ने छ अघिल्लो अनुभवमा आधारित तपाईंले यी कार्यहरूमा गर्नुभयो। हामी तब देख्न सक्छौं कि मेशिन लर्नि human मानव व्यवहारको आधारमा आधारित छ, अनुभवहरूबाट सिक्ने। सकरात्मक वा इनामको रूपमा सकारात्मक र नकारात्मक उत्तेजना दिनुको साथै।
प्रदान गरिएको मानव व्यवहार समयको साथ आफैलाई दोहोर्याउँदछ। जबकि ती ब्यवहारहरू जसलाई सजाय दिइन्छ, कम गरिन्छ कम केसहरू सम्म जबसम्म तिनीहरू बुझिदैनन्। फोनमा यसको अनुप्रयोगको एक राम्रो उदाहरण यो कार्य सही तरिकाले गरिएको छ भनेर प्रमाणित गर्न, हामीले एक बटन थिच्नु पर्छ वा हाम्रो औंला स्लाइड गर्नुपर्दछ।
उदाहरण को लागी, यदि तपाईको एन्ड्रोइड फोन को अनुहार मान्यता छ, जब यसलाई सक्रिय बनाउने र फोनले हामीलाई चिनेको देखेर, हामीले हाम्रो औंला स्लाइड गर्नु पर्छ। यो संकेत हो कि फोनले सही तरीकाले आफ्नो काम गरेको छ। यदि, अर्कोतर्फ, हामीले देख्यौं कि उपकरणले हामीलाई चिन्न सकेन, हामीले गर्नुपर्दछ अनलक कुञ्जी प्रविष्ट गर्नुहोस् उहीमा। यस मामलामा, यो निहित गरिएको छ कि यो राम्रोसँग गरिएको छैन, त्यसैले अर्को पटक तपाईले त्यो मामलामा असफल हुनु हुँदैन।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता एन्ड्रोइडमा प्रयोगको लागि के हो?
कृत्रिम बुद्धिमत्ता पत्ता लगाउन यो सामान्य बढ्दो छ, र यसैले एन्ड्रोइड फोनहरूमा मेशिन लर्निंगको साथ। यो फोन बजारमा सामान्य भएको छ। र यो त्यस्तो चीज होइन जुन हामीलाई चकित तुल्याउँदछ किनकि यसले हामीलाई कार्यहरूको एक श्रृंखला प्रदान गर्दछ जुन यसलाई महत्वपूर्ण बनाउँछ।
सामान्य अनुहार पहिचान र अभिव्यक्ति पहिचान
स्वचालित भाषा अनुवाद
क्यामेरा सुधार (अतिरिक्त कार्यहरू जस्तै वस्तुहरू पहिचान गर्न)
तपाईंको स्वाद वा ईतिहासमा आधारित सामग्री सुझावहरू
लेखको पूर्ण मार्ग: एन्ड्रोइडसिस » ट्यूटोरियलहरू » मेशिन लर्निंग भनेको के हो र यो केको लागि हो?
प्लेटफार्महरू, वस्तु भौतिकी र स्पेक्ट्रम ब्रेकमा नियन बत्तीहरू
फ्रान्सले phones फोनहरू पत्ता लगायो जुन धेरै विकिरण उत्सर्जन गर्दछ